Nnukwu anụ (nkeji) (Naruto) - Magazin ADL ➡
Nnukwu anụ (ihe omume) (Naruto)
Nnukwu anụ mmiri (ihe omume)
Dezie "nnukwu anụ"
Ke Ba Ba Ba (Bakemon)
Boruto # 198 (Lelee Online)
Boruto Isi # 31, Boruto Isi # 32
Nwere ike 09, 2021
"nnukwu anụ”(Nkọwa dị mkpirikpi, Bakemon) bụ ihe omume 198 nke Boruto: Naruto ndị na-esote anime.
Naruto na -ajụ Kawaki maka njirimara Delta, Kawaki wee gosi na ọ bụ Kara Inner. Delta maara onye Naruto bụ, ma rịọ ya ka ọ pụọ n'akụkụ, nke ọ jụrụ. Kawaki na -adọ ha aka na ntị maka ike dị n'ime, Boruto na -ahụkwa ụjọ ya. Delta kpebiri igbu Naruto, onye na -agwa Boruto na Kawaki ihe ha ga -eme. Naruto na Delta na -amalite ịlụ ọgụ, na -agbanyere ihe otiti anụ ahụ, ruo mgbe Naruto nwetara oghere. Ọ na -anwa ịdata Rasengan, mana Delta ji anya gbanwere ya were were ya. Ọ na -ebuso ya agha site n'ịgbanwe ụkwụ ya, dị ka Kawaki, wee gosi na ejirila ninja sayensị kwalite ahụ ya. Naruto nyere uwe mwụda chakra ya ma maliteghachi ọgụ. Ọ na -egbochi ịgba ya ụkwụ, mana Delta gbanwere ụkwụ ya, merụọ Naruto ahụ. Ọ na -eji ogwe aka chakra agbaji ụkwụ, ọ na -ebo ya ebubo na ọ bụ nnukwu anụ mmiri ka ọ na -emegharị ụkwụ ya. N'ịbụ onye na -echegbu onwe ya, Boruto nwara itinye aka, mana Naruto dọrọ ya aka na ntị megide ya. Ọ na -eyi Delta egwu, na -agba ya ume ka ya na ya nọrọ. Ọ jụrụ Delta ihe Kawaki bụ nye ya, ọ chọpụtakwara na ọ na -anwa ịghọgbu ya ka ọ kpughee ozi.
Ọ na -ewepụ ọnya ahụ n'ahụ ya, o wee bilie, na -agwọ ọnya ahụ. Boruto nwere ahụ iru ala, Kawaki na -ekwusi ike na ha kwesịrị ịpụ. Naruto na Delta maliteghachiri ọgụ, ma mgbe akpọchiri ha, Delta wepụtara Rasengan ọ na -etinye n'anya ya. Ọ na -eji ahụ ya gbanwere agbanwe ọgụ. Naruto jiri mwepụta Lava Rasenshuriken jiri ụkwụ mebie ụkwụ ya, mana ọ na -edegharị ya naanị, yabụ na -atụpụta etu ọ ga -esi tie ya ihe. Boruto chọrọ imepụta oghere maka Naruto ịwakpo ya, mana Kawaki na -echetara ya iwu Naruto, wee kọwaa na site na ịpụ, ọ na -enye ohere Naruto ịpụ apụ, ma gbakwụnye na Naruto bụ onye na -ebute ọgụ ahụ, iji gbochie mwakpo. na -abịa n'ụzọ ha. Delta na -ekwu maka ikike Naruto, mana mgbe ọ tụrụ aro ka ọ chịlie aka elu, ọ na -ewepụta ncha n'anya ya. Naruto na -agbara ha ọsọ, Kawaki na -echegbukwa ha, na -akọwa na e mere ha iji gbochie ikike ịmụgharị. Naruto na -ewepụ mwakpo dị otú ahụ ga -abụrịrị ụtụ isi chakra, mana Delta na -agụta ya naanị ka ọ ga -akụ otu ugboro. Ọ na -anwa ịbịaru ya nso ka ọ daa nkụ ya, mana ọ na -agbapụ. Ọ na -ahụ ụmụaka site na drone ya, wee ziga ụzọ ha. Naruto na -akụ ya aka, na -akụ aka ya. Ọ na -awakpo Boruto, na -atụba ya n'ụzọ Naruto, wee jide Himawari. Boruto na -arụ ọrụ Kama ya wee tụba Rasengan na -apụ n'anya. Agbanyeghị na ọ na -apụ n'anya, Delta nwere ike ịhụ ya na drone ya, wee banye ya. Ọ na -atụba Himawari n'ikuku iji manye Naruto ịbanye n'ụzọ osisi ya. Mgbe anwụrụ ọkụ ahụ kwụsịrị, ọ na -eju mmadụ niile anya ịhụ na Kawaki gbochiri ogwe osisi nke ogwe aka ya gbanwere. Kawaki gwara Boruto na ha nọkwa na ite ite. Àgwà Kawaki gbagwojuru Delta anya, na -ewekwu iwe na ọnọdụ ahụ.
Echefula isoro ndị enyi gị kerịta ibe a na Facebook & Instagram! #Anụmanụ #ihe nkiri?
Mmiri mmiri ozị 48 ezuola?
Ọ dị sentimita 189 n'ogologo?